आङ नै सिरिङ हुने विश्वका डरलाग्दा ११ विमान स्थलहरु - Aarthiknews
एजेन्सी । संसारमा धेरै एयरपोर्टहरू छन् जहाँ विमान अवतरण वा उडान भर्दा गर्नु ज्यान जोखिममा पार्नु भन्दा कम छैनन् । बेलालय शासित सेन्ट हेलेनाको मिड–एटलान्टिक टापुमा बनेको विमानस्थललाई विश्वको सबैभन्दा निष्क्रिय एयरपोर्ट भनिन्छ । यो किनभने क्लिफसाइड रनवेमा हावाको दिशाले एयरपोर्ट अवतरणलाई खतरनाक मानिएको छ । यो विमानस्थल ‘सी’ श्रेणीमा परेकाले यहाँ विमान अवतरण गर्ने गरेको छ ।
पोर्चुगलको मदेराको विमान स्थल विश्वभरी नै चर्चित नै छ । जो यहा छुट्टी मनाउने पुग्छन यो ठाउँ जहाजको अवतरण प्रख्यात मानिन्छ छ । कहिलेकाहीँ खतरालाई ध्यानमा राख्दै विमान अवतरण हुनेबित्तिकै उच्च स्थानको नजिक भएकाले यहाँको चर्को हावाले अक्सर अप्ठ्यारो पार्छ । यो अवतरण को समयमा घातक साबित हुन सक्छ ।
सिन्ट मार्टेनमा अवतरण गर्ने विमानहरूको भिडियोहरू हेर्न धेरै प्रयास पनि गर्नुपर्दैन । क्यारेबियन एयरपोर्टमा विमान अवतरणको फुटेजले सोशल मिडियाहरु भरिएका छन् । यसको रनवे समुद्र तटको ठीक पछाडि बनाइएको छ । त्यसैले विमानहरू समुद्र तटमा उपस्थित मानिसहरूको टाउको माथिबाट विमान उड्ने गरेको छ । मानिसहरू यो देखेर रमाइलो मान्ने पनि गरेका छन् । तर यो धेरै खतरनाक छ । सन् २०१७ मा पनि विमानको इन्जिनमा विस्फोट हुँदा यहाँ एक महिलाको मृत्यु भएको थियो । ती महिला त्यहाँका सबै पर्यटक जस्तै स्विमिङ कस्टुम लगाएरको अबस्थामा विमानको पखेटामा झुण्डिएकी थिइन् ।
पारो विमान स्थल भुटानको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । जुन समुन्द्री सतहबाट ७,३६४ फिटको उचाइमा बनेको छ । अहिलेसम्म केही पाइलटले मात्रै त्यहाँ जान अनुमति पाएका छन् । राम्रो देखिने अवस्थामा मात्रै विमान त्यहाँ अवतरण गर्न सकिन्छ । यहाँ रडार नहुँदा म्यानुअल अप्रोच अपनाउन रहेको छ । धावनमार्गमा अवतरण गर्नुअघि पहाड र घरको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
बेलायतको राजधानी लन्डनमा हवाई यात्रा आजकल असामान्य भएको छ । तर, जब यो सहर माथिबाट एउटा विमान उड्छ तब मानिसहरुको आंग सिरिङ हुने गरेको छ । त्यहाका गगनचुम्बी भवनभएको स्थान क्यानारे वोर्फको घाट धेरै नजिक देखिन्छ । रनवेमा विमानहरू धेरै ठाडो कोण पारेर अवतरण गर्छन् । सधै त्यहाँ हेलिकप्टरमा अवतरण गरेको अनुभूति गर्ने गरेका छन ।
जुन २०२१ मा, जब फ्रन्टियर एयरलाइन्सको विमान रोनाल्ड रेगन, डीसीमा रनवेबाट चिप्लियो, एक यात्रुले यसलाई डरलाग्दो रूपमा वर्णन गरेका छन् । त्यहाँ पोटोमिक नदी नजिक रनवेमा अवतरणका लागि मोडहरु बनाइएको छन । जसले कहिलेकाहीं पाइलटलाई प्लेन ह्याण्डिल गर्न गाह्रो बनाउँछ ।
भारतको लेहमा रहेको विश्वको २३ औँ अग्लो विमानस्थल हो । यो सुन्दा अचम्म नलाग्न सक्छ । यो विमानस्थल समुन्द्री सतहबाट करिब १०,६८२ फिटको उचाइमा छ । चारैतिर पहाडले घेरिएको छोटो रनवे भएको यो विमानस्थल निकै जोखिमपूर्ण छ । दिउँसो हावा धेरै चल्ने भएकाले बिहान मात्रै उडान अवतरण गर्न सकिन्छ तर ठूला विमानहरू यहाँ जान सक्दैनन् । पाइलटले यहाँ जानुअघि विशेष तालिम लिनुपर्छ ।
अस्ट्रियाको टायरोलको पहाडी राजधानी शीर्ष स्कीइङ गन्तव्य हो । त्यहाँ विमान उडाउने पाइलटहरूका लागि विभिन्न चुनौतीहरूको सामाना गर्न पर्ने हुन्छ । धावनमार्गमा अवतरण गर्ने विमानलाई करिब आठ हजार फिटको उचाइबाट तल ल्याउनुपर्छ । पहाडमा आउने हावा र तिनको दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
ब्राजिलको साओ पाउलोको आन्तरिक विमानस्थलमा ड्रेनेज समस्या भएको छ । जसका कारण सन् २००७ मा पनि दुर्घटना भएको थियो । यद्यपि आज पनि यहाँ विमान अवतरण गर्नु सजिलो काम होइन । यो शहरको मुटुमा रहेको एकल रनवे हो जुन सन १९३० मा शुरु भएको थियो । अवतरणमा विमानहरू छेउछाउको अपार्टमेन्ट ब्लकहरू र घरहरूको छानाहरू माथिबाट जान पर्ने हुन्छ ।
नेपालको लुक्ला विमान स्थल चारैतिर पहाड, तीव्र हावाहुरी र छोटो धावनमार्गका कारण यो विमानस्थल जोखिमपूर्ण बनाएको छ । कहिलेकाहीँ यसलाई संसारको सबैभन्दा खतरनाक एयरपोर्ट पनि भनिन्छ । यसको धावनमार्ग पहाडको बीचमा रहेको चट्टानमा अबस्थित छ । जसको लम्बाइ १,७२९ फिट मात्र छ । धावनमार्गको अगाडि गहिरो खाडल छ । विमानको गति कम गर्न यो रनवे अगाडिबाट अलि माथि उठाइएको छ ।
सेन्ट हेलेनाको विमान स्थल तीव्र हावा र चट्टानसाइड कारण यात्रुहरू त्यहाँ अवतरण गर्दा कम्पन महसुस गर्छन् । यो रनवे शुरुमा साना विमानहरूको लागि डिजाइन गरिएको थियो । तर, पछि बोइङ ७५७ को लागि विस्तार गरिएको थियो ।
क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्यमा किन भारी गिरावट भइरहेको छ ?
भारतमा मुद्रास्फीति समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा भयावह रूप लिन्छ : डा. राजन
मदिरा बादशाह माल्यालाई बेलायतमा ठूलो झट्का